CASE: Waxqabadka Bulshada ee Waxbarashada Ardayda
Samaynta kiis loogu talagalay maalgalinta Dugsiga Dadweynaha Minnetonka.
Xubnaha bulshada Minnetonka waxay sameeyeen CASE si ay ugu doodaan Sharci Dejinta Minisota si ay u hesho maalgalinta dugsiga oo dhameystiran. Hadafkeenu waa inaan la soconno isbeddelada suurtagalka ah ee sharciga iyo inaan ku dhiirrigelino sharci dejiyeyaasha inay dib u maalgashadaan waxbarashada dadweynaha ee heer gobol.
CASE waa urur aan xisbi ahayn. Ma aqbali doonno musharrixiinta xafiis la soo doortay, oo ay ku jiraan jagooyinka aan xisbiyada loo dooran. Shakhsi ahaan muwaadin ahaan, xubnaha CASE lagama mamnuuco kaqeybqaadashada dadaallada kaladuwan ee doorashada, laakiin fikradahooda iyo ficilladoodu kuma matalayaan CASE sidaas. CASE wuxuu ka kooban yahay waalidiinta badankood, laakiin waxaan sidoo kale la shaqeynaa xubnaha bulshada iyo hoggaamiyeyaasha ganacsatada.
Waxaa jira wajiyo badan oo ku wajahan dadaalkan oo ay ka mid yihiin xubinnimo, xiriir, cilmi baaris, qorsheyn dhacdo iyo u ololeyn. Ballanqaadku wuu kala duwan yahay waxaana jira meel loogu talagalay qof kasta oo jecel inuu wax ka beddelo nolosha ardaydeena iyo degmadeena dugsiga.
Bayaankayaga sharci dejinta
Matalaada Sharci Dejinta ee Degmada Minnetonka 276
Soo hel xildhibaankaaga
Tilmaamo qoraal ah
La hadalka sharci dejiyeyaashaada (talooyin)
Kooxaha kale ee u doodista waxbarashada
Ururka Degmooyinka Iskuul Weyn
Minnesota North Star (Websaydhka Gobolka)
Golaha Guurtida Minnesota
Golaha Guurtida Mareykanka
La xiriirida wakiiladaada
Sharci-dejiyayaasha iyo Guddoomiyuhu waxay u baahan yihiin inay maqlaan waxa mudnaantaada leh. Qaado Laba Daqiiqo si aad u xasuusiso inay muhimadda koowaad u yeeshaan Minnesota.
Weydiiso inay muhimadda koowaad siiyaan waxbarashada.
Ayaa i matalaya?
Laba daqiiqo ayaa dhan waxay qaadataa! Telefoon deg deg ah ama emayl ayaa farqi u dhexeeya. Farriimaha ayaa laga yaabaa in laga tago saacadaha kadib sidoo kale.
Aqoonso nafsad ahaantaada
Keen magacaaga, cinwaankaaga iyo lambarka taleefankaaga.
Ku mahadsanid dhammaan dadaalkooda.
Weydii inay "mudnaanta koowaad siiyaan waxbarashada" inta lagu guda jiro doodaha miisaaniyadda ee soo socota.
Emayllada, hubi inaad gelisid "Constituent" qadka maadada.
Fariinta muhiimka ahi waa: "Waxaan u baahanahay dad aqoon leh si aan u adkeynno dowladnimadeenna."